Izibuko Zezemidlalo zokugijima, ukuhamba ngebhayisikile nokushushuluza - i-ULLER
IClarion Blue / Bomvu
IClarion Blue / Bomvu 140.00 €
UClarion Ophuzi / Okuluhlaza okwesibhakabhaka
UClarion Ophuzi / Okuluhlaza okwesibhakabhaka 140.00 €
Clarion Mhlophe / Bomvu
Clarion Mhlophe / Bomvu 140.00 €
UClarion Mnyama / Mnyama
UClarion Mnyama / Mnyama 140.00 €
IClarion Mnyama / Luhlaza okwesibhakabhaka
IClarion Mnyama / Luhlaza okwesibhakabhaka 140.00 €
Intaba-mlilo ebomvu / oluhlaza okwesibhakabhaka
Intaba-mlilo ebomvu / oluhlaza okwesibhakabhaka 120.00 €
Intaba-mlilo Oluhlaza / Okumnyama
Intaba-mlilo Oluhlaza / Okumnyama 120.00 €
Intaba-mlilo emhlophe / Isibuko
Intaba-mlilo emhlophe / Isibuko 120.00 €
Intaba-mlilo Emnyama / Isibuko
Intaba-mlilo Emnyama / Isibuko 120.00 €
Intaba-mlilo Emnyama / Luhlaza okwesibhakabhaka
Intaba-mlilo Emnyama / Luhlaza okwesibhakabhaka 120.00 €
I-Thunder Blue / Isibuko
I-Thunder Blue / Isibuko 160.00 €
I-Thunder Grey / Luhlaza
I-Thunder Grey / Luhlaza 160.00 €
Ukuduma Okumhlophe / Okuluhlaza okwesibhakabhaka
Ukuduma Okumhlophe / Okuluhlaza okwesibhakabhaka 160.00 €
Ukuduma Okumnyama / Okuhlaza
Ukuduma Okumnyama / Okuhlaza 160.00 €
Ukuduma Okumnyama / Okubomvu
Ukuduma Okumnyama / Okubomvu 160.00 €
I-Bolt Red / Mnyama
I-Bolt Red / Mnyama 89.95 € 185.00 €
I-Bolt Red / Mirror
I-Bolt Red / Mirror 89.95 € 185.00 €
IBolt Ephuzi / Emnyama
IBolt Ephuzi / Emnyama 89.99 € 185.00 €
I-Bolt Yellow / I-Purple
I-Bolt Yellow / I-Purple 89.95 € 185.00 €
UKUQHUBA NOKUGIJIMA IMIDLALO YEMIDLALO YABESIFAZANE NABESIFAZANE
EZEMIDLALO AMA-LUNGLASSES AMADODA NABESIFAZANE
I-Uller® ingumkhiqizo waseSpain wezesekeli zezemidlalo nemfashini ebonakalayo eyasungulwa ngo-2006, enesipiliyoni seminyaka engaphezu kwengu-15 esihlinzeka ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme kulo mkhakha. Njengamanje, umkhiqizo wethu uyaziqhenya ngokuba yingxenye ye-Indicom Brands, inkampani ehlanganisa ndawonye imikhiqizo eminingana, kufaka phakathi i-Uller®, uphawu lobuchwepheshe kakhulu eqenjini.
Njengenkampani, sigxile ekwakhiweni, ekukhiqizweni nasekusabalalisweni kwezingilazi zezemidlalo ze-unisex nezesekeli zemidlalo ezenzelwe abesilisa nabesifazane ezinokusebenza okuphezulu kakhulu, eziklanyelwe umkhuba wobungcweti noma wobungcweti bemikhakha ehlukene yezemidlalo, okwenziwe ezindaweni zombili ezasemadolobheni, isibonelo ukugijima noma ukuhamba ngebhayisikili, kanye nemidlalo yokuzijabulisa, njengokushibilika eqhweni, ukuhamba ngebhayisikili emgwaqweni, i-MTB, ukugijima ngomkhondo, ukushaywa ngumoya nokunye okuningi okwenziwa ngaphandle. Ngalesi sizathu, ku-www.ullerco.com uzothola amaqoqo ezinhlobonhlobo zezingilazi zezemidlalo ezisezingeni eliphakeme kakhulu, ezenziwe ngabasubathi babagijimi.
Khumbula ukuthi konke ukucaciswa kobuchwepheshe bezibuko zethu zezemidlalo kuyatholakala encazelweni yemodeli ethile ethile. Kodwa-ke, singakutshela ukuthi wonke amaqoqo wethu wezingilazi zezemidlalo ayiPrimiyamu, nokuthi sinamamodeli amaningi anemibala ehlukene nemiklamo, kufaka phakathi izingilazi zomgwaqo, umzila noma ukuhamba ngebhayisikili kwentaba, izibuko zokushibilika eqhweni, izingilazi ezisebenzayo kanye nezibuko. , kuya ngokutholakala kweqoqo ngalinye kusitoko sethu.
Zinjani izinhlobo zethu zezingilazi zezemidlalo?
Siyakwazi ukubaluleka kokugqoka izibuko zelanga lapho sikhanyiswa yilanga. Ngalesi sizathu, ukuqoqwa kwethu kwezingilazi zezemidlalo kwenziwa ngezinto ezingamelana nekhwalithi ephezulu kakhulu, ezinikeza ukuvikeleka okuphezulu nokunethezeka ngesikhathi semidlalo. Ngokufanayo, amalensi ayo anobuchwepheshe be-X-Polar obunencazelo ephezulu yokuvikelwa kwe-UV-400. Ngakho-ke, wonke amaqoqo ethu atholakalayo wezibuko zelanga zabesilisa nabesifazane anikela ngokukhanya okungenakunqotshwa kuwo wonke umkhanyo wokukhanya. Lezi zibuko zokuhamba ngebhayisikili noma izingilazi ezisebenzayo, njengoba kungenzeka, zithuthukisa umbono wakho wokuqhathanisa nombala. Ngale ndlela, zonke izingilazi zethu zezemidlalo, kufaka phakathi ukuqoqwa kwezingilazi zamabhayisikili ezihlinzekwa kadokotela nezingavumelekile, zinobuchwepheshe obuhle kakhulu kumalensi azo kanye nokuvikelwa okuphezulu kwe-UV-400.
Amanye amaqoqo wethu wezingilazi zezemidlalo afaka amamodeli angahleleka, enzelwe ukwanelisa izidingo zabasubathi abanesimo esithile samehlo, futhi abadinga izingilazi zokulungisa imidlalo. Lezi zinhlobo zezingilazi zemidlalo kadokotela zinesikhala noma isiqeshana esincane ohlakeni lwazo ukufaka ilensi yokulungisa, uma kudingeka. Uma uthenga noma yiziphi izinhlobo zezingilazi zemidlalo kadokotela ezitholakala esitolo sethu esiku-inthanethi, kufanele uziyise kudokotela wamehlo wakho ukuze akwazi ukuhlenga amalensi okulungisa ngokuya ngesimo samehlo akho. Lawa malensi kufanele afakwe kusiqeshana esitholakala kuhlaka lwengilazi yakho yezemidlalo kadokotela. Izibuko zezemidlalo eziguquguqukayo ozithola kuwebhusayithi yethu, ngokwesibonelo, amamodeli wethu wezingilazi zokuhamba ngebhayisikili, angaphansi kokutholakala kwesitoko sethu. Uma ufuna ukuthenga amamodeli analezi zici, kufanele uqiniseke ngalokhu ngokubheka incazelo yemodeli ngayinye yezingilazi zezemidlalo ikakhulukazi.
Zibandakanya ini izibuko zethu zezemidlalo?
Izinhlobo zethu zezibuko zelanga zifaka:
Uzimele owenziwe ngezinto zokumelana okuphezulu nokukhanya ngomklamo we-unisex, ngakho-ke kufanelana nokuthandwa kwabesilisa nabesifazane. Kodwa-ke, sinamamodeli wezibuko zezemidlalo zabesilisa kanye namamodeli wezingilazi zezemidlalo zabesifazane.
Ingilazi enencazelo ephezulu yobuchwepheshe be-X-POLAR nokuvikelwa kwe-UV-400 CAT. 3.
Izinhlobo zethu zezingilazi zezemidlalo ezinengilazi ezishintshanayo zifaka enye i-lens yesibili CAT1, yezinsuku zokukhanya okuphansi.
Imiyalo kanye nesitifiketi sewaranti.
IMIQOQO YAKHELWA IMIDLALO
Thola izinhlobo zethu zezibuko zabagibeli bamabhayisikili.
Sisungule izinhlobonhlobo zezingilazi zemidlalo ezenziwe ngokukhethekile ukweqa futhi zeqe okulindelwe abagibeli bamabhayisikili abangochwepheshe, abangochwepheshe abangochwepheshe nabasafufusa. Ngakho-ke, amaqoqo ethu amaningi afaka izinhlobo zezingilazi zokuhamba ngebhayisikili nezingahambi kadokotela, namamodeli ezigilazi zomgwaqo, umzila noma izintaba zamabhayisikili, ukududuza bonke abathandi bamabhayisikili, ngisho nalabo abadinga ukuzishintsha ngokuya ngesimo sabo samehlo.
Izinhlobo zezingilazi zebhayisikili zePrimiyamu ezitholakala kuwebhusayithi yethu zinokusebenza okuphezulu kakhulu emakethe. Zenziwe ngezinto ezingamelana namalensi wencazelo ephezulu, ezinikeza induduzo nokuvikelwa kumsubathi ngesikhathi sokuhamba ngebhayisikili. Eqinisweni, izibuko zethu eziningi zelanga ezihamba ngebhayisikili zifaka ilensi yesibili ngokukhethekile yezinsuku ezinokukhanya okuncane. Ngaphezu kwalokho, amaqoqo ethu wezibuko zelanga ezihamba ngamabhayisikili, ezabesilisa nabesifazane, atholakala ngosayizi abahlukene, imibala nemiklamo. Ngamunye wabo unokuvikelwa kwe-UV-400 futhi kusiza ukuthuthukisa ukugqama kombala ngesikhathi sokuhamba ngebhayisikili ezindaweni zombili zasemadolobheni nezemvelo. Ngokuqondile, amamodeli wethu wezingilazi zokuhamba ngamabhayisikili emigwaqweni alungele zombili izinhlobo zezwe. Le modeli ikhonjiswa nasekusebenzeleni ukuhamba ngebhayisikili ezintabeni nasemigwaqweni, noma ngohambo lokuvakasha lomjikelezo.
Thola amamodeli wethu wezibuko zabagijimi.
Sinikeza izibuko zelanga ezihamba phambili ezisebenza emakethe, njengoba kushiwo abalingani bethu bebhizinisi, amaklayenti kanye namanxusa ezemidlalo. Izinhlobo zethu zezingilazi ezigijimayo zivivinywe ngabasubathi abangochwepheshe, izimpendulo zabo ezisisiza senze ukuthuthuka okudingekayo ukunikela ngezibuko ezisezingeni eliphakeme kakhulu, nezici ezisiza abagijimi ukuthi benze kangcono.
Izinhlobo zethu zezibuko ezigijimayo zisetshenziswa yizo zonke izinhlobo zabasubathi, ngisho nalabo abangahlanganyeli kulo mdlalo othize, kepha abathanda ukugijima ezindaweni zasemadolobheni noma ngaphandle. Kodwa-ke, wonke amamodeli wethu wezibuko ezigijimayo enzelwe abagijimi abangochwepheshe nabaqeqeshiwe, ngenhloso yokuhlangabezana nokudlula izidingo zabo ezibaluleke kakhulu ngesikhathi sokuzijwayeza kwezemidlalo.
Izinhlobo zethu zezibuko zelanga zabagijimi bendlela. Njengoba zinjalo?
Ngaphezu kwamaqoqo ashiwo ngenhla, siphinde sangeza onobuhle enkulumweni yethu yezingilazi zemidlalo, eziklanyelwe ukugijima kwezintaba kanye nemijaho yama-ultra-distance. Ngokukhethekile, umkhondo wethu osebenzisa izibuko zelanga unikeza ukuvikelwa, ukumelana nokukhanya okuvikela abagijimi bomzila ngenkathi bewela indawo enezinselele futhi engalingani, enakekela futhi ithuthukise umbono wabo.
Ngale ndlela, izibuko zethu zelanga zokugijimisa umzila zilungele ikakhulukazi imarathoni ye-ultra kanye nemincintiswano emide, ende futhi eyengeziwe ende emide. Siphinde safaka izinhlobo zezingilazi zelanga zomzila ohamba ngamalensi awo ashintshanayo avumela umgijimi womzila ukuthi asebenzise isigaba esivumelana kangcono ngokwesimo sezulu nezimo zokukhanya.
Khumbula ukuthi yonke imikhiqizo yethu ingaphansi kokutholakala kwesitoko sethu. Ngaphezu kwalokho, zonke izici ezithile zezingilazi zethu zezemidlalo, kufaka phakathi amamodeli wethu wezibuko zokushushuluza, ukugijima, ukulandela umzila kanye namamodeli wethu wezingilazi zokuhamba ngamabhayisikili emigwaqo zingatholakala encazelweni yazo ngazinye. Ngale ndlela, sicela wonke amakhasimende ethu ukuthi afunde kahle incazelo yomkhiqizo ngamunye ukuze akwazi ukukhetha kalula izibuko zelanga ezintsha zezemidlalo.
EZEMIDLALO AMA-SUNGLASSES AMADODA
I-Uller® ineminyaka engaphezu kwengu-15 yesipiliyoni yokuklama nokusabalalisa izesekeli zemidlalo zabathandi bemfashini nabazidlayo. Njengamanje, inkampani yethu iyingxenye yeqembu le-Indicom Brands, elingumkhakha weqembu wezobuchwepheshe nobuchwepheshe.
Phakathi kwemikhiqizo yethu nezinsiza sifaka izinhlobo eziningi zezingilazi zezemidlalo ze-premium, eziklanyelwe ukwanelisa nokwedlula izidingo ezibaluleke kakhulu zabasubathi abanekhono nabangahle babe khona, ngemiklamo yobuchwepheshe nokusebenza okuphezulu kwazo zonke izinhlobo zemidlalo, kusuka kumabhayisikili noma ukugijima ezikhaleni . emadolobheni, kwezemidlalo eyeqisayo nakwezokuzijabulisa zangaphandle, njengokushushuluza eqhweni, ukuhamba ngebhayisikili ezintabeni, ukulandela umzila, ukubhukuda umoya, nokunye okuningi.
Ingxenye yomsebenzi wethu ukunikela ngezibuko zezemidlalo ezihamba phambili emakethe, kwabesilisa nabesifazane, ngemiklamo ye-unisex ekhangayo nezindinganiso ezisezingeni eliphakeme kakhulu. Ngale ndlela, siqala ngezikhathi ezithile ukuqoqa izingilazi zezemidlalo zamadoda ezisezingeni eliphakeme, ezenzelwe ikakhulukazi imimoya yamahhala nabathandi bezemidlalo beqiniso.
Zinjani izibuko zethu zezemidlalo zabesilisa futhi ziyini izinzuzo zabo?
Izibuko zethu zezemidlalo zabesilisa zinamazinga aphezulu okusebenza nekhwalithi atholakala emakethe, njengoba kushiwo abalingani bethu bebhizinisi, amakhasimende nabasubathi. Zonke izingilazi zethu zezemidlalo zabesilisa zinikela ngozimele abangazweli futhi abakhanyayo abenziwe ngezinto ezinikeza amandla nenduduzo ngesikhathi semidlalo. Ngaphezu kwalokho, ukuqoqwa kwethu kwezibuko zelanga zezemidlalo zamadoda kunamalensi anokuvikelwa okuphezulu kwe-UV-400, ubuchwepheshe bawo obunikeza incazelo ephezulu nokuphikisana okungenakulinganiswa. Yi-High Tech Performance Optics X-POLAR, etholakala emaqoqweni amaningi ezingilazi zezemidlalo zamadoda atholakala kuwebhusayithi yethu, ngokusho kokucaciswa nokutholakala kwemodeli ngayinye.
Lobu buchwepheshe besimanje, kanye nokwenza kwethu okuhle kanye nekhwalithi yezinto ezibonakalayo, nokusabalalisa kwethu okuhamba phambili kanye nensizakalo yokulethwa kwezidingo, yikho okusenza sihluke kakhulu kunayo yonke eminye imikhiqizo yezingilazi zabesilisa ezikhona njengamanje emakethe. Ngaphezu kwalokho, sisebenzisa amasu wokuthuthuka aqhubekayo esisebenza ngawo njalo ukwenza imikhiqizo yethu kanye nezinsizakalo zethu zibuyele esimeni, kokubili kwezemfashini nakwezamasu. Ngenxa yalokho, wonke amaqoqo ethu wezingilazi zemidlalo zabesilisa asiza ukuvikela nokwenza ngcono umbono wezemvelo kanye nokukhululeka ngendlela ephumelelayo yokunethezeka nokuzola okuphezulu kwanoma yimuphi umsubathi oqeqeshiwe noma osezingeni eliphansi. Ngale ndlela, ukuqoqwa kwethu kwezibuko zelanga zezemidlalo, kufaka phakathi amamodeli wethu wezibuko zokushushuluza, ukugijima, ukulandela umkhondo kanye namamodeli wethu wezibuko zamabhayisikili emigwaqo yamadoda anikela ngokukhanya okunganqobeki kulo lonke uhla lokukhanya, okuqinisa umbono wokuqhathanisa nombala, futhi uvimbe ukudlula kwemisebe ye-ultraviolet kusuka elangeni.
Zihlanganisani izingilazi zethu zezemidlalo zabesilisa?
Izinhlobo zethu zezibuko zelanga zabesilisa zifaka:
Uzimele owenziwe ngezinto zokumelana okuphezulu nokukhanya.
Ingilazi enencazelo ephezulu yobuchwepheshe be-X-POLAR kanye nokuvikelwa kwe-UV400 CAT.3. Izinhlobo zethu zengilazi ezishintshanayo zifaka ilensi yesibili ye-CAT.1.
Khumbula ukuthi i-repertoire yethu yemikhiqizo yezemidlalo nezinsiza, kufaka phakathi izingilazi zezemidlalo zamadoda, kuncike ekutholakaleni kwesitoko sethu. Ngakho-ke, qaphela ukuthi zonke izici nokucaciswa kwezobuchwepheshe kweqoqo ngalinye lezingilazi zezemidlalo zamadoda, kufaka phakathi amamodeli ethu okushushuluza, ukugijima, ukulandela umzila, kanye namamodeli wethu wezibuko zamabhayisikili omgwaqo wabesilisa, kungatholakala encazelweni umkhiqizo ngamunye othize, otholakala kuleso sigaba.
Yini ukubaluleka kokugqoka izibuko zelanga zemidlalo?
Ukuphuma uyodlala imidlalo kuhle kakhulu empilweni yakho, ikakhulukazi uma kwenziwa ngaphandle. Kodwa-ke, kubaluleke kakhulu ukuthi wonke umsubathi asebenzise okokusebenza okuyikho futhi afake izibuko zelanga zezemidlalo, noma ngeke ahlangabezane nezinhloso zawo noma azivikele kahle elangeni nasemimoyeni. Lokho kusho ukuthi enye yezinkinga ezithinta kakhulu abasubathi namuhla yimisebe yelanga, nokuthi iwuthinta kanjani umbono. Abasubathi abaningi bezwa uhlobo oluthile lokuvikelwa lapho benza ezemidlalo ngezinsuku ezipholile nezikhanya kancane, noma kunjalo, imisebe ye-ultraviolet idlula kalula kunoma iliphi ifu elimboze ilanga, yize kunokukhanya okuncane.
Khumbula ukuthi ukufaka izibuko zelanga zabesilisa ezemidlalo kuvikela elangeni futhi kusiza ekuvikeleni izifo zamehlo ezifana ne-cataract, i-melanomas, ngisho nokusivikela kumdlavuza wamehlo. Ngakho-ke, ukwenza ezemidlalo ngaphandle Kudinga ukuvikelwa kwezingilazi zezemidlalo zamadoda ezisezingeni eliphakeme ezinakekela amehlo futhi zisebenzise umehluko wombala. Kungakhathalekile ukuthi yimuphi umdlalo owenzayo, uma uwenzela ngaphandle futhi uzibeka elangeni, into enhle ongayenza ukunakekela nokwandisa uhla lwakho olubukwayo ngezibuko zelanga zezemidlalo ezisezingeni eliphakeme, njengalezo ozithola ukulahlwa e-Uller, okukhombise ukuthi bahlukile ngazo zonke izindlela.
Zinjani izingilazi zethu zamabhayisikili zamadoda?
Njengamanje, sinomlando omkhulu wezingilazi zamabhayisikili zamadoda, eziklanyelwe ukusebenza kahle kwalo mdlalo. Izinhlobo zethu zezingilazi zamabhayisikili zamadoda ziyahluka ngosayizi, umbala nokuma, noma kunjalo, ngayinye inikela ngekhwalithi ephezulu nokuqina. Empeleni, ukusebenza okuphezulu kwamamodeli ezibuko zamadoda ethu okugibela amabhayisikili kubeke i-Uller® phakathi kwezinhlobo zezingilazi zezemidlalo ezihamba phambili emakethe, ikakhulukazi ngezinga lethu lekhwalithi / lentengo, kanye nazo zonke izinzuzo abaziletha kubagibeli bamabhayisikili ikakhulukazi. ukuvikelwa nokubonakala ezindaweni ezahlukahlukene.
Ngaphandle kokungabaza, siyaziqhenya ngokunikela ngabagibeli bamabhayisikili abangochwepheshe nabangase babe khona izindlela eziningi ezahlukahlukene ezingilazini zamadoda ezihamba ngamabhayisikili, kuya ngokutholakala kwamaqoqo ethu esitokwe. Phakathi kwazo sifaka nezinye izinhlobo zezingilazi zokuhamba ngebhayisikili zamadoda anamalensi ashintshashintshayo, akuvumela ukuba ushintshe ingilazi ngokushesha, bese ukhetha isigaba esidingwa umgibeli webhayisikili ngokuya ngesimo sezulu nezimo zokukhanya ngalolo suku, kungakhathalekile ukuthi uzijayeza ukuhamba ngebhayisikili: intaba, umgwaqo, noma edolobheni. Izibuko zethu zamabhayisikili ezihamba emgwaqweni ikakhulukazi isibonelo esihle kakhulu sokuthi sinezibuko zelanga zokuhamba ngebhayisikili ezilungele zombili izindawo zasemadolobheni nezemvelo. Ngalesi sizathu, kusukela kumqhudelwano wamabhayisikili oqhudelana kuya kumuntu othanda kakhulu ojabulela ezokuvakasha zokuhamba ngebhayisikili ngezimpelasonto, uzothola phakathi kwezinketho zethu zezingilazi zamabhayisikili zamadoda, okungcono kakhulu kuye.
Zinjani izingilazi zethu zokugijima zabesilisa?
Izibuko zokugijimisa amadoda zivela kubadala bethu abathengisi abahamba phambili Ezingeni likazwelonke nakwamanye amazwe. Abasubathi abaningi abangaqhudelani noma abangochwepheshe kulo mdlalo ikakhulukazi, bayakujabulela ukuqeqeshwa ngokugijima ezindaweni zasemadolobheni edolobheni, nasezikhaleni zemvelo ezingaphandle, njengasebhishi noma ezintabeni. Ngakho-ke, bobabili abagijimi abangochwepheshe nabangavamile bayakwazi ukuthola inketho efanelekile phakathi kwamaqoqo ethu ehlukene wezibuko zamadoda ezisebenzayo. Eqinisweni, ngezikhathi ezithile, sibuyekeza amamodeli wethu ngezibuko zelanga ezisebenzayo zamadoda, ngenhloso yokunikeza ikhwalithi engcono kakhulu yomkhiqizo kuleso sigaba. Eqinisweni, zonke izingilazi zethu ezigijimayo zihlolwe abagijimi abangochwepheshe abasinika okwabo impendulo namaphoyinti okuthuthuka. Ngokuya ngalokhu, senza ukulungisa okufanele uma kunesidingo futhi ngaleyo ndlela sithole izibuko ezihamba phambili zamadoda asemakethe, ngaphandle kokungabaza.
Izinhlobo zethu zezibuko ezigijimayo zabesilisa zinikeza ukuguquguquka nokunethezeka okukhulu kwezemidlalo, ngoba zenziwe ngezinto ezingamelana nalula, ezisezingeni eliphakeme kakhulu. Ngaphezu kwalokho, phakathi kwamaqoqo wethu ahlukene, sinikela ngamamodeli athile anamalensi ashintshanayo ukuze umgijimi akwazi ukunakekela ukubona kwawo futhi abone kahle lapho egijima nganoma yisiphi isikhathi sosuku. Ngakho-ke, izingilazi zethu eziningi ezisebenzayo zamadoda zifaka ama-lens amabili, elilodwa elezinsuku ezishisayo CAT. Kodwa-ke, imininingwane yesimodeli sezingilazi zamadoda ezithile ezitholakalayo ezitholakala kuwebhusayithi yethu sizohlala sincike ekubhaleni kwethu lolo nyaka, nasekutholakaleni kwesitoko sethu.
Thola amaqoqo ethu wezibuko zelanga zabesilisa zabagijimi bendlela
Ngokusebenzisa amasu okuthuthuka okuqhubekayo asetshenziswa yithimba lethu labaqambi kanye nabasubathi, sakha ukuqoqwa kwezingilazi zezemidlalo ezikhethekile zokugijima ezintabeni noma ezokulandela umkhondo, zombili ezingochwepheshe nezingaphambi kokusebenza. Njengoba zenziwe ngokukhanya okwengeziwe nokungazimele, futhi zinamalensi wencazelo aphakeme ebanzi, amamodeli ethu wezibuko ezigijimisa amadoda ayakwazi ukumelana nanoma yisiphi isimo umsubathi adlula kuso lapho ehamba ezindaweni eziyinselele nezingalingani zezintaba, enakekela futhi enze ngcono umbono wakho ezimweni eziyinselele kakhulu. Ngakho-ke, umkhondo wamadoda wethu wokusebenzisa izibuko zelanga nawo ulungele imarathoni ye-ultra kanye nemincintiswano yamabanga amade yanoma yisiphi isigaba: ophakathi, omude futhi owengeziwe.
Ngaphezu kwalokho, amaqoqo ethu amaningi wezibuko ezigijimisa abantu besilisa anethuba lokuthi ungashintshanisa ilensi ngokuya ngezimo zezulu ngesikhathi sohambo lwezintaba. Lolu hlobo lwemikhondo yamadoda esebenzisa izibuko zelanga, olutholakala kuwebhusayithi yethu kuya ngokutholakala kwesitoko sethu, lubandakanya ilensi enkulu yeCAT3. neyesibili yezikhathi zokubonakala okuphansi kwe-CAT1. Lawa malensi avumela ushintsho lwamalensi olulula nolusheshayo kumasekhondi ambalwa, lapho kunokusizakala khona umgijimi ngamunye womzila.
Sebenzisa amamodeli wethu wezibuko zezemidlalo eziguquguqukayo zabesilisa
Amanye amaqoqo ethu ezingilazi zezemidlalo zabesilisa afaka amamodeli angahleleka, kulabo abasubathi abadinga ukugqoka izibuko zokulungisa ngesikhathi sokuzijwayeza kwezemidlalo. Izibuko zezemidlalo zabesilisa ezitholakala kuwebhusayithi yethu zenzelwe ukuthi zivumelane nezimo zamehlo umgijimi angaba nazo, ngokwesibonelo, i-myopia noma i-hyperopia. Ngakho-ke, amanye amaqoqo ethu engilazi yezemidlalo, ngokwesibonelo, izingilazi zamabhayisikili ezigunyaziwe zamadoda ezitholakala kuwebhusayithi yethu, zinesiqeshana sangaphakathi esivumela ukufakwa kwamalensi okulungisa kuzimele zawo, afanele abagijimi, abagibeli bezindiza, abagibeli bamabhayisikili nabasubathi bazo zonke izigaba abadinga ukuphothula izibuko zabo zezemidlalo ngesikhathi sabo.
Kubalulekile ukugqoka izingilazi zemidlalo zamadoda ezizilingana kahle izidingo zakho ze-ocular. Izibuko zokugibela ibhayisikili zamadoda futhi ngokujwayelekile zonke izibuko zemithi etholakala kuwebhusayithi yethu, zinikeza izinzuzo eziningi. Eqinisweni, enye yezinzuzo zayo eziphezulu, ngaphezu kokukusiza ukuthi ugxile futhi ubone kahle lapho uqhuba ezemidlalo, ukuthi ngeke usenze sibe sibi leso simo esivele sikhona emehlweni akho.
Uma uthenga noma yimaphi amamodeli wethu wezingilazi zemidlalo kadokotela esitolo sethu esiku-inthanethi, kube yilezi zibuko zokugijima, ukushushuluza, ukulandela umzila noma izibuko zokuhamba ngebhayisikili zabesilisa, kufanele uziyise kudokotela wamehlo othembekile ukuze zikhiqize amalensi afanele ngokwesimo seso lakho. Lawa malensi yiwona okufanele uwafake ohlakeni lwezingilazi zakho zezemidlalo zabesilisa. Khumbula ukuthi zonke izinhlobo zethu zezingilazi zokuhamba ngamabhayisikili zabesilisa, nawo wonke amamodeli wethu angaguquguqukayo ezemidlalo ezahlukahlukene angaphansi kokutholakala kwesitoko sethu.
EZEMIDLALO ZEZEMIDLALO ZABESIFAZANE
Isipiliyoni seminyaka yethu engaphezu kwengu-15 emkhakheni wezemidlalo, sisivumele ukuthi sibe nenqwaba yezingilazi zezemidlalo zabesifazane, ezenzelwe, phakathi kweminye imidlalo yangaphandle, yokuhamba ngebhayisikili, ukugijima, ukulandela umzila nokushushuluza., Ngokusho kwamaqoqo ahlukene atholakalayo kuwebhusayithi yethu. Ngale ndlela, sinikeza izinketho ezahlukahlukene zezingilazi zezemidlalo zabesifazane ngemibala ehlukene, osayizi nobubunjwa, eziguqulwa kahle ngokwezidingo zakho ezithile zemidlalo.
Eqinisweni, amafreyimu ethu enziwe ngezinto ezifana ne-TR-90, enikela ukumelana okuphezulu nokududuza kubasubathi abangochwepheshe abangochwepheshe noma abasezingeni eliphakeme noma labo abaphethe, ababaphendule - kuya ngecala - babe yizigilamkhuba ezisebenzayo, zokushushuluza nokushushuluza. ukugijima, noma izibuko zokuhamba ngebhayisikili ezisezingeni eliphezulu zabesifazane. Futhi hhayi lokho kuphela, zilungele umkhuba wokuhamba ngebhayisikili ezintabeni eziphakeme, i-MTB, neminye imidlalo yangaphandle enjenge-windsurfing noma i-snowboarding nokunye okuningi okudinga ukuvikelwa emisebeni yelanga, iqhwa, amanzi, amagatsha, umhlaba, izinambuzane, njll., Futhi nokuthi zisho isidingo sokuba nobubanzi obubonakalayo obubonakalayo nokuhluka kombala ngesikhathi semidlalo. Ngaphezu kwalokho, uma kubhekwa i-ergonomics yabo, kanye nokwakheka kwabo, izibuko zethu zabesifazane zokuhamba ngebhayisikili, futhi ngokujwayelekile, zonke izinhlobo zethu zezibuko zelanga zezemidlalo zabesifazane, zinikela ngemikhumbi-mkhathi emikhulu, njengoba ilingana kahle nentaba yobuso bakho, ehlanganisa yonke indawo engaphandle.
Kwesinye isikhathi, ukubanjwa kwezingilazi zabesifazane ezihamba emgwaqweni ezitholakala emakethe, futhi ezinye zezinhlobo zezingilazi zabesifazane ezisebenzisa izibuko ozithola ku-Intanethi, ezingezona ezisezingeni eliphakeme kakhulu, zingaphazanyiswa yimidlidliza. imizila, noma ngezikhathi lapho abasubathi befika ngejubane elikhulu ngenkathi bezijwayeza noma iyiphi yale midlalo. Eqinisweni, abasubathi abaningi bavame ukufuna leli phuzu elithile kusuka kumikhiqizo ehlukile, ngoba abazizwa ukuthi izidingo zabo zikhona ngempela.
Ngalesi sizathu, e-Uller® sizibekele umgomo wokuklama nokukhiqiza izingilazi zemidlalo ezihamba phambili zabesifazane, zokuhamba ngebhayisikili, ukugijima, ukushibilika eqhweni, ukugijima ngomkhondo, neminye imidlalo yangaphandle, ngenhloso yokugwema ukungazinzi kwezibuko. ebusweni besifazane, okuvamise ukuba banzi ngokwe-anatomically. Ngakho-ke, amamodeli wethu wezibuko zezemidlalo zabesifazane aklanywe ngobukhulu obufanele nokuguquguquka okwanele, ukuqinisekisa ukwesekwa okuphelele nokuzinza phakathi nokunyakaza okujwayelekile ngesikhathi sokuzijwayeza kwezemidlalo. Ngaphezu kwalokhu, esinye isici esihle sezibuko zethu zokuhamba ngamabhayisikili emigwaqeni yabesifazane, nezibuko zethu zelanga zomzila wokugijima wabesifazane, ukuthi zivala ngokwanele ukuvikela ubuso ngokuphelele futhi ikakhulukazi amehlo.
AMAGLASI ASEGxile Ezidingweni Zabagijimi
Esikhathini esedlule, imikhiqizo yezemidlalo ibingabheki abesifazane njengomsubathi kangako, futhi ibinganaki nokuthi izodinga imishini ebalungele ngesikhathi sokuziqeqesha kwezemidlalo. Kulezi zinsuku, noma kunjalo, izinto sezishintshe kakhulu futhi e-Uller® nathi sijoyine lo mkhuba obalulekile. Kungakho izesekeli zethu zezemidlalo zamantombazane, ikakhulukazi ezinemiklamo emikhulu ye-unisex, zihlanganisa izidingo eziyisisekelo zabesifazane bezemidlalo, kanye namakhono adingekayo egatsheni labesifazane lezinhlaka ezahlukahlukene zezemidlalo. Ngaphandle kokungabaza, e-Uller siyayeseka futhi siyayithuthukisa imidlalo yabesifazane, yomibili neyabantu abancane. Yize imiklamo yethu eminingi yabesifazane yokuhamba ngebhayisikili ifaneleka ngokulinganayo kwabesilisa ngenxa yokwakheka kwabo nge-unisex, kuyiqiniso ukuthi siyaqiniseka ukuthi sihlangabezana nezidingo zabesifazane ikakhulukazi futhi siqinisekisa ukuthi bazivumelanisa ngokuphelele nezidingo zabo, ukuhlinzeka ngezabesifazane izibuko zezemidlalo ezinekhwalithi elilungile nokusebenza.
SISEBENZISA IMIKHAKHA YOKUTHUTHUKISA KWEZINGXENYE ZABESIFAZANE BETHU
Ukuvelela kuyinto esihlukanisayo, yingakho singayeki ukwenza imikhiqizo yethu ibe ngcono ukuze sinikeze izibuko zezemidlalo ezihamba phambili zabesifazane emakethe. Ngakho-ke, ngaphezu kokuba neqembu lobuchwepheshe elihle kakhulu, futhi sinethuba elikhulu lokuba neqembu labasubathi abasezingeni eliphakeme, abasisekelayo ngempendulo yabo ukwenza kahle ukwakheka nokusebenza kwezingilazi zethu zezemidlalo zabesifazane, ngemuva kokuzivivinya. imikhakha yabo yezemidlalo, futhi basinikeze imibono yabo namaphuzu okuthuthuka. Phakathi kweqembu lethu lezemidlalo labesifazane siqhakambisa abasubathi abanjengoDesiré Villa, abagibeli bamaselwandle abanjengoLucía Martiño, abashayeli bomoya abanjengoBlanca Manchón, noma abagibeli beqhwa abanjengompetha weParalympic u-Astrid Fina.
Ngaphezu kokuvikelwa yilanga, imisebenzi efana neqhwa, ukushushuluza, ukuhamba ngebhayisikili noma ukugibela ibhayisikili kuhlotshaniswa nokukhethwa kwamalensi akhethekile wokulwa nokwethuka, ngoba le midlalo amathuba okuba nomthelela ovela ngaphandle aphezulu. Phakathi kuka-90% no-100% wezinkinga zamehlo ezidalwa ukushaywa kungagwenywa ngezingilazi zezemidlalo zabesifazane ezisezingeni eliphakeme njengalezo ozithola ku-www.ullerco.com. Ngalesi sizathu, zombili ifreyimu nelensi yezingilazi zabesifazane bethu zenziwe ngezinto ezingamelana nomthelela. Izibuko zezemidlalo zabesifazane ezitholakala kuwebhusayithi yethu zenzelwe izimo ezithile zemidlalo nokukhanyisa, ukuze sikwazi ukuthatha ukusebenza kwethu siye ezingeni eliphakeme kakhulu nganoma yisiphi isikhathi. Kungakho ilensi ngayinye izothuthukisa imininingwane ethile namathoni futhi inciphise amanye ngokuya ngezimo zemvelo nezemidlalo.
Ngaphezu kwalokho, amamodeli wethu amaningi wokuhamba ngebhayisikili, ukugijima noma umzila wokugijima wabesifazane anethuba lokuthi amalensi abo ayashintshana. Lezi zinhlobo zifaka ezi-2 ezihlukile, ilensi yezinsuku ezinelanga CAT3., Kanye nenye ilensi yezinsuku zezimo ezimbi CAT1. Ngakho-ke, lezi zigaba ezimbili zizohlanganisa cishe i-100% yezidingo zabagibeli bamabhayisikili, abagijimi, abagijimi bezitimela ... Ngisho nakulabo abasubathi abadinga izibuko zabesifazane, sinamamodeli akwazi ukuguquguquka, ngoba afaka ingaphakathi lohlaka oluvumela ukufaka amalensi okulungisa, njengoba kuvunyelwe, ngokwesibonelo, ngamaqoqo ethu wezibuko eziguquguqukayo zamabhayisikili zabesifazane. Qaphela ukuthi konke ukucaciswa kobuchwepheshe bezibuko zethu zezemidlalo zabesifazane kuyatholakala encazelweni yemodeli ethile ethile. Ngokunjalo, ukuqoqwa kwezibuko zelanga zezemidlalo zabesifazane ezitholakala kuwebhusayithi yethu kungaphansi kwesitoko sethu.
Ziyini izinzuzo izibuko zemidlalo yabesifazaner?
Intuthuko emkhakheni wezinto ezintsha yenza kube lula ukuhlinzeka ngemikhiqizo efana nezibuko zelanga zezemidlalo ngezinto eziya ziba ngcono ukulwa nemisebe yelanga. Uma uqhuba imisebenzi yezemidlalo, ikakhulukazi ngaphandle, imvelo nezici zayo kuhluka kaningi, futhi kubalulekile ukuba nombono ocacile ngaso sonke isikhathi. Izibuko zelanga zezemidlalo zabesifazane zithanda lokhu kucaca embonweni nokwehluka okukhulu kulokho okubonayo okuzungezile. Ukusetshenziswa kwalolu hlobo lwezibuko zezemidlalo zabesifazane kuzokuvumela, ngaphandle kokungabaza, ukujabulela induduzo enkulu yokubuka ezothokozela induduzo yakho ngenkathi uziqeqesha. Sikukhumbuza ukuthi izibuko zelanga zezemidlalo zabesifazane kumele zibe nezihlungi ze-ultraviolet eziyi-100%. Uma bengenayo, akukho ukuvinjelwa kwemisebe ye-UV futhi ukungena kokukhanya okuyingozi okuvela elangeni kuqediwe; Kulokhu sengeza ukuthi, ngaphandle kokuhlunga nombala welensi, lapho sifaka ilensi emnyama, umfundi uyanwetshwa ngoba ezwa ukuthi ukukhanya akutholayo kunciphile, okuhumusha ekuvezeni okukhulu.
Yiziphi izigaba zamalensi akhona, futhi kunconywa nini ukuwagqoka?
Amalensi wesigaba 0: Dlula phakathi kuka-80% no-100% wokukhanya, okwenzelwe isibhakabhaka esingaphakathi endlini noma esimboziwe.
Amalensi wesigaba 1: Phakathi kuka-43% no-80% wokukhanya kuyangena. Ngokuvamile amathoni aphuzi noma awolintshi, futhi enzelwe ukukhanya okuphansi noma izinsuku zenkungu.
Amalensi wesigaba 2: Zihlunga phakathi kokukhanya okungu-18% no-43%, sizithola ezikhungweni eziningi zokushibilika eqhweni noma eqhweni.
Amalensi wesigaba 3: Idlula phakathi kuka-9% no-18%, wokukhanya, iyona esetshenziswa kakhulu kwizibuko zelanga ukuze zisetshenziswe ngokujwayelekile
Amalensi wesigaba 4:Ihlunga phakathi kokukhanya okungu-3% no-8%, kuyanconywa kwezemidlalo okwenzeka kusuka kumamitha ayi-3000 wokuphakama.
Okufanele ukuthi okungenani kube nezinhlobo ezimbili zamalensi ezingilazi zemidlalo yabesifazane, enye yezinsuku ezibalele (CAT.3) nenye yezinsuku ezimbi (CAT.1).
Zihlanganisani izibuko zelanga zezemidlalo zabesifazane e-Uller?
Izinhlobo zethu zezibuko zelanga zezemidlalo zabesifazane zifaka:
Izici zezibuko zabagibeli bamabhayisikili besifazane. Yikuphi okufanelekile?
Izibuko zokuhamba ngebhayisikili zabesifazane ziyithuluzi elibalulekile lokuqinisekisaukuvikelwa kwamehlo ethu, ngaphezu kokukhulisa nokwenza ngcono uhla lwethu lokubuka lapho siqhuba lo mdlalo. Ngakho-ke, kubaluleke kakhulu ukugqoka izibuko zabesifazane zokuhamba ngamabhayisikili emigwaqo noma izibuko zelanga zabesifazane zokuhamba ngebhayisikili ezintabeni, kuya ngesimo ngasinye. Lokhu kuvimbela imisebe yelanga ekubeni ingasiphuphuthekisi ngokuphelele, isivikele emoyeni nokuthi yome amehlo ethu, ngaphezu kokwehlisa imithelela ebangelwe ukubuya kwamatshe emgwaqweni nokuvimbela udaka oluvela emhlabathini lungangeni esikhaleni sethu, noma izinambuzane ezibheke ngamehlo ethu, phakathi kwezinye izinzuzo eziningi zokuvikelwa ezintweni zezulu; Izibuko zelanga zabesifazane ezihamba ngebhayisikili zisebenza njengewindi langaphambili lemoto, kodwa emehlweni ethu.
Lapho sikhetha ifreyimu yezingilazi zabesifazane ezihamba ngebhayisikili, kufanele sikhumbule ukuthi ukuphepha kuza kuqala. Uma uzijwayeza I-MTB, lapho ukuvezwa kwamaqhuqhuva anezimila, imithelela, udaka nokudlidliza kubanzi, kufanele ukhethe ifreyimu engazweli kepha eguqukayo, enokulingana okuhle. Khetha amamodeli wezibuko zelanga ezihamba ngebhayisikili zabesifazane ezenziwe ngezinto ezinokuqiniswa kwenjoloba emathempelini nasebhulohweni lasekhaleni, lokhu ukuqinisekisa ukuthi bahlala besesimweni kulo lonke uhambo. Amalensi enziwe nge-polycarbonate, ukuze akwazi ukumelana nomthelela wetshe noma wegatsha ngejubane eliphezulu ngaphandle kokubeka amehlo akho engcupheni, anomklamo we-ergonomic ngokuphelele olungisa ukwakheka komzimba womuntu, unikeze induduzo, umoya omncane futhi ukuvikelwa.
Ziyini izinzuzo zokugqoka izingilazi zabesifazane abenza lo mdlalo?
Kubaluleke kakhulu ukuthi sivikele amehlo ethu lapho sizololonga ukugijima noma ukuhamba ngomkhondo. Uma sizijwayeza noma iyiphi yale midlalo entathakusa noma kusihlwa, amathuba okukhanya kwelanga asishaye ngqo emehlweni ayanda, kanye naphakathi nosuku lapho ilanga lisendaweni yalo ephakeme. Izibuko zelanga ezihamba kahle zabesifazane, noma izibuko zelanga ezisebenzayo uma kungokukhethekile kwakho, zizokukhipha kule nkinga, nemiphumela yayo, njengokuhamba nokuwa okungenzeka lapho kunokukhanya okukhulu kakhulu emvelweni futhi siyakwenza ungaboni phansi noma izithiyo esingahlangabezana nazo. Khumbula ukuthi lapho sigijima ngaphandle sivame ukuvezwa izinhlayiya eziyingozi ezingena emehlweni ethu.
Enye inzuzo yokugqoka izibuko zelanga ezigijimayo zabesifazane ukuthi zizosebenza njengesithiyo esivikelayo ukugwema lolu hlobo lwesigameko. Ngakolunye uhlangothi, uma sigijima ebusika noma entwasahlobo, lapho izimvula ziningi khona, izibuko ezigijimayo zabesifazane zingagwema umuzwa ongathandeki wokuzwa imvula ishaya amehlo akho. Ngenxa yalokho, ngaphansi kwalezi zimo noma ezinye ezingezinhle, uma sigqoka izibuko zelanga ezisebenza kahle zabesifazane, sizogijima sivule amehlo futhi sinyuse ukusebenza kwethu kahle emjahweni. Ngakolunye uhlangothi, singakwazi ukuthwala ukuma komzimba wethu okuphoqelelwe, okuholela ekuxakaneni emahlombe futhi lokho kwandisa ubungozi bokuthi le ngxabano iphela ebuhlungu bezicubu. Ngakho-ke, ukugqoka izibuko zelanga ezihamba phambili zabesifazane nakho kungasiza ekuthuthukiseni nasekuphumuleni ukuma kwethu ngenkathi usebenza.
Yini izibuko zezemidlaloKunconyelwe i- abagijimi besifazane abahamba ngomkhondo?
Umzila wokusebenzisa izingilazi zabesifazane esiwuncoma ukuthi usebenze kulo mdlalo yilowo ohlanganisa amalensi ezemidlalo esigaba 3, asiza ukulwa nemisebe yelanga futhi akhiqize umbono omuhle. Uma imodeli iyilensi eshintshashintshayo futhi ifaka isigaba esiphansi, njenge-CAT1. ngezimo ezingezinhle, kungcono. Uma ungumgijimi njalo, futhi wenza ukusebenzisa ibanga elide, ukutholakala kwakho ku-UV nokukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka kuzokhula kakhulu. Ucwaningo lwakamuva lwesayensi lukhombisa ukuhlangana phakathi kokuchayeka elangeni kanye nokuwohloka kwe-macular, yingakho izibuko zelanga ezihamba phambili zabesifazane bakho kumele zibe nokuvikelwa kwe-UV okubalulekile emehlweni akho.
Seluleka abasebenzisi ukuthi bakhethe izibuko zelanga zokuhamba (noma ezisebenzayo) zabesifazane ngokuvikelwa kwe-UV nohlaka olungasindi, olusongekile, olufanelana kahle nobuso bakho, futhi olunganyakazi lapho lusebenza. Izibuko zelanga ezisebenza ngabesifazane ezenziwe ngezinto ze-TR-90 ziyindlela enhle. Ungacabanga nokugqoka amalensi anombala. Kunemibala ethile esebenza kahle ngokuya ngezimo zezulu ozozigijima ngaphansi kwazo. Uma, ngaphezu kwalokho, udinga izibuko zezemidlalo zabesifazane, sikukhumbuza ukuthi kuwebhusayithi yethu, kuya ngokutholakala kweqoqo ngalinye esitokisini sethu, sinamamodeli athile anohlaka lwangaphakathi ongabeka kulo amalensi okulungisa. Lezi zibuko zelanga ezibhalwe ngudokotela zilungele abesilisa nabesifazane.